Iyo Apple Watch haizove inonyudza asi inopokana Ndinobva mac
Iyo Apple Watch haizove inonyudza asi inopesana nekupenya
Zvishoma nezvishoma, data nyowani inoramba ichiuya kubva kuCupertino kubva kuvanhu vakaedza akasiyana Apple Watch mamodheru mushure mezuro Keynote. Wese munhu anobvuma kuti icho chigadzirwa chenyeredzi chinozadzisa iyo iPhone nenzira inoshamisa. Pachave pasina munhu ane iPhone uye asingafunge kuve nerudzi urwu rwewachi.
Nekudaro, uye sezvatakaratidza muzvinyorwa zvakapfuura, izvo zveCupertino hauna kudoma zvese zvigadzirwa zvemahara ndiani muridzi wechigadzirwa uyezve kana kwete kana chiri chepasi. Zvimwechetezvo, iro rekuzvidzivirira dhata rakasiiwa iro, Sekureva kwenyanzvi, zvinogona kuve muzuva rimwe rekushanda.
Isu tatova pachena kuti hatizokwanise kuve neichi chishandiso mumaoko edu kudzamara zvazivikanwa kuti ndeupi mwedzi wekutanga wa2015, saka kusvika panguva iyoyo isu hatigone kuvimbisa zana muzana kuti hunhu hunopoperwa ndohwe kana kwete kunyatsoziva . Sekureva kwevanhu vakapinda musangano wakakosha, ivo vakwanisa kuona kuti zvechokwadi, iyo Apple Watch haisi kuzove isina mvura kunyangwe ichave yakagadzirira kumira kumvura inoputika kana kunyangwe kunaya kwemvura. Kana iwe ukamira kuti unyatsotarisisa dhizaini yayo, haina jack yemusoro, inoshanda neBluetooth, uye nzira yekuchaja yechigadzirwa ndeyekuisa mukati. Inoramba ichionekwa kana bhatani repadivi uye jog vhiri rakagadzirira kushandiswa munzvimbo dzakanyorovera, izvo zviri chokwadi kuve zvakadaro.
Ndokusaka, muvhidhiyo inoshambadzira yakaburitswa neApple, hatione chero nguva chero munhu anodzidzira mitambo inosanganisira kunyudza chishandiso mumvura. Tinogona kuona vanhu vachimhanya, kuchovha bhasikoro, kurovedza muchinjikwa uye mimwe mitambo yakawanda isina hukama nenyika yemumvura.
Rumwe ruzivo rwuri kutanga kusvika, ruchibva kuvanhu vakwanisa kuisa maoko avo pariri, nderekuti zvidhori zvemidziyo zvinogona kuiswa pane zvatinoda, pane izvo zvakakwana kuti isu tiite yakafanana refu yekudhinda chiratidzo chatinoita pane iOS zvishandiso kukwanisa kufambisa iwo maapplication kutenderera. Zvimwechetezvo, ine mukana wekutsvaga yedu iPhone nekuburitsa ruzha mukati mayo yakavhurwa kubva panguva, inonyanya kunzi "Ping yangu iPhone".
Kupedza iyi batch yeminiti yekupedzisira maficha, tinoda kuti iwe uzive kuti iyo Apple Watch inogona kushandiswa isingaite, ndokuti, isina kubatana neiyo iPhone. Ehezve, huwandu hwezviito iwe hwauchazokwanisa kuita hunoderera zvakanyanya, asi isu tichakwanisa kuteerera mimhanzi kuburikidza neBluetooth, kubhadhara kuburikidza neApple Pay, kurekodha mushandisi chiitiko uye kugadzirisa zvimwe zvinoshandiswa. Zvisinei, sevagadziri vanogadzira mashandisirwo ayo, tichava nawo, sekutaura kwaTim Cook, wachi ine mikana isingaperi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch haizove inonyudza asi inopesana nekupenya
Sergi Aisa (@ igres88) akadaro
Mune rimwe remavhidhiyo, mukomana anoonekwa achidira mvura pamusoro pake uye zvinogona kuoneka kuti zvinowira sei paApple Watch.
Pindura Sergi Aisa (@ igres88)
iTunes yakagadziridzwa kuita vhezheni 11.4